Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwempilo yethu yesimanjemanje, ngomqondo othile, izinga lethu lokuphila seligxumele phezulu. Lokhu akugcini nje ngemizamo eqhubekayo yabantu bakithi baseChina, kodwa futhi nemiphumela yemizamo eqhubekayo yesayensi nobuchwepheshe bethu. Ngakho-ke, sinemibono ehlukile yesidingo nokuqhubeka kokusebenza kwezinto ezihlukene Kunemibono eyehlukene futhi imiqondo yohlelo lokusebenza lwezinto ezinhle. Eminyakeni yamuva nje, ukuthuthukiswa komkhakha waseChina kusheshe kakhulu, okunikeze amathuba amahle entuthuko embonini yokukhiqiza yaseChina.
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwe-e-commerce ye-Intanethi, kulethe umthelela omkhulu ekusebenzeni kwabakhiqizi. Ngaphansi kwesimo esinjalo sangemuva, uma abakhiqizi bafuna ukugcina inzuzo yabo yokuncintisana emshinini wezinyathelo ngezinyathelo, kudingeka benze ushintsho ezicini ezintathu zabasebenzisi, ukumaketha nokuphatha. Kuphela ngokugcina ijubane ngokuthuthukiswa kwezikhathi lapho kungeke kuqedwe khona yimakethe.
1. Dlulisa imodeli yendabuko yokuthengisa
Ukusuka ekuthengiseni imikhiqizo kuya ezinsizeni zokuthengisa, ukukhangisa nokuphromotha kwaba ukumaketha kwenethiwekhi nokumaketha kwamagama. Ngasikhathi sinye, yadiliza inqubo yokuthengisa. Esikhathini esedlule, ukukhokha bekungukuphela kokuthengisa, futhi manje sekuyisiqalo sokuthengisa. Ngoba ukubuyiselwa kwemali akusasho nje ukuthengiswa komkhiqizo, kepha unolwazi lwekhasimende, kufanele ulandelele lolu lwazi futhi uqhubeke nokuthuthukisa izinsiza.
2. Imiqondo yokuphatha emisha
Esikhathini esedlule, ukusebenza ngezinga elikhulu, inqobo nje uma i-oda lingafinyelela izindleko eziphansi nezithelo eziphakeme, kepha alikwazi ukugcina amakhasimende njalo. Manje yisikhathi sokuthuthukiswa kwe-Intanethi lapho amanani entengo abonakala khona, okuholela kuzindleko eziphakeme kanye nenzuzo ephansi, nosizi lwabakhiqizi, okuholela ekufeni kwezinto ezingezona ezintsha, kanye nokwesaba ukuqanjwa kabusha. Imvelo yangaphandle ebhekene nabakhiqizi be-hose clamp iya ngokuya iba nzima, futhi nobunzima bokusebenza buyanda. Lesi sikhathi esinzima sibeka izidingo eziphezulu zokukhangisa. Ungazisebenzisa kanjani izidingo zokuguqulwa kwabaphathi kanye nokwenza ngcono ukuthengisa, kuhlanganiswe nezindlela zokuphatha zabakhiqizi, abakhiqizi be-hose clamp kudingeka basungule umqondo we-inthanethi, basebenzise isu “lokunciphisa izindleko zokusebenza”, futhi bakhe uhlelo “lokuhlaziya olukhulu,” ukuze ukuze uzuze ukuzivumelanisa okusheshayo nemvelo engu-3. Isu lisekelwa ngokuqinile.
Abaphathi bazohola ngenkuthalo futhi banciphise izingozi ngokuphumelela.